Semalt SEO विशेषज्ञले तपाइँका ब्याकलि Working्कहरू किन काम नगरेको वास्तविक कारणहरू वर्णन गर्दछ
सम्पूर्ण इन्टरनेट मूलत: साइटहरू, व्यक्तिगत वेब पृष्ठहरू र लिंकहरूको संग्रह हो। शब्द "वर्ल्ड वाइड वेब" तथ्य यो छ कि विभिन्न साइटहरु लि through्क मार्फत लि are्क भएको तथ्यबाट उत्पन्न भयो। र एक लिंक बनेको छ जब एक साइटले अर्कोमा लिंक गर्दछ।
ब्याकलिks्कहरू लिंक हो जुन एक साइटबाट अर्कोमा जान्छ। साइट राखिएको जहाँ लिंक राखिएको छ, यो बाहिर जाने छ। तर जुन साइटमा यसले लैजान्छ, यो आगमन हो।
लि Links्कहरू जुन उही साइटमा अन्य पृष्ठहरूमा नेतृत्व गर्दछन् तिनीहरूलाई आन्तरिक लिंकहरू भनिन्छ। यी लिंकहरू एसईओको लागि पनि महत्त्वपूर्ण छन्, तर यसको प्रभाव बाहिरी लिंकहरूको उपस्थितिको रूपमा महत्त्वपूर्ण छैन।
ब्याकलिks्कहरूले वेबसाइट पदोन्नतिमा प्रमुख भूमिका खेल्छन्। धेरै गुणस्तरीय ब्याकलिks्क भएको साइट अरूहरू भन्दा बढी लोकप्रिय मानिन्छ, त्यसैले खोज इन्जिनहरूले यसलाई उच्च स्थान दिन्छ।
ब्याकलिks्कहरू प्राप्त गर्न सजिलो छैन, तर साइटहरू जसले यसलाई पाउँदछन् ठोस स्थितिहरू छन् र खोज इञ्जिनहरूले विश्वास गर्दछन्। जुन बदले जान्छ लक्षित ट्राफिकको आकर्षण।
किन backlinks SEO को लागी महत्त्वपूर्ण छ
एक वा अर्को तरीकाले, तपाइँ सजिलैसँग याद गर्न सक्नुहुनेछ कि एसईओ र प्रमोशनमा लगभग सबै लेख ब्याकलिंक्ससँग डिल गर्दछ। किन यो यति महत्त्वपूर्ण छ? ब्याकलिink्क कहानी सुरू भयो जब खोजी ईन्जिन गुगलका संस्थापकहरूले साइटहरूको गुणस्तर मूल्यांकन गर्न एक अद्वितीय एल्गोरिथ्म विकास गरे।
यस एल्गोरिथ्मले ब्याकलिks्कहरूको उपस्थितिलाई समावेश गर्‍यो र यसको संख्यालाई प्रमुख कारकहरू मध्ये एकको रूपमा गणना गर्दै। अधिक ब्याकलिks्कहरूले एउटा साइटमा नेतृत्व गर्‍यो, त्यो साइटले अधिक विश्वसनीयता पायो।
वास्तवमा यो विचार आफ्नो समयको लागि सरल र प्रभावकारी थियो। यो तार्किक छ कि यदि कुनै साइट सक्रिय रूप मा लिंक गरिएको छ, तब यो साइट ध्यान पाउन योग्य छ। अर्को शब्दहरुमा, वेबमास्टरहरु र प्रयोगकर्ताहरु यो वा तिनीहरुको लिंक संग साइट को लागी मतदान गर्न लाग्छ। यस एल्गोरिथ्मले खोजीको गुणस्तर सुधार गरेको छ।
यद्यपि वेबमास्टर्सले अत्यन्त चाँडो महसुस गर्‍यो कि खोज ईन्जिनमा लगभग कुनै पनि साइट प्रमोट गर्न सम्भव छ। अनि कसरी? लिंक ठूलो मात्रामा खरीद गरेर। यसका अतिरिक्त, ब्याकलिंक्सको स्रोतहरू प्राय अत्यन्त कम गुणस्तरका साइटहरू हुन्, मुख्य रूपमा लिंक दाताहरूको रूपमा सेवा प्रदान गर्न।
प्रतिक्रियामा, गुगल र अन्य खोज ईन्जिनहरूले एल्गोरिथ्ममा परिवर्तन गरेका छन्। केहि समयको लागि, त्यहाँ अफवाहहरू पनि थिए जुन लिंकले काम गर्न छाडेको थियो। तर के यो वास्तवमै त्यस्तो हो?
के आज ब्याकलिks्कहरू महत्त्वपूर्ण छन्?
हो, एल्गोरिदम परिवर्तन गरिएको छ। तर रद्द छैन! परिवर्तनले ब्याकलिंक्सको स्रोत मात्र चिन्ता गर्दछ। यदि पहिलो चरणहरूमा खोज ईन्जिनहरूले केवल ब्याकलिks्कहरूको संख्यालाई ध्यानमा राख्यो, उनीहरूको गुणवत्तामा ध्यान दिएन भने, आज अवस्था बिल्कुल विपरीत देखिन्छ। तिनीहरूको गुण मात्रा भन्दा महत्त्वपूर्ण छ।
ब्याकलिks्क अझै पनी पदोन्नति मा ठूलो भूमिका खेल्दै छन्। र यस सम्बन्धमा गरिएको सबै अध्ययनहरूले देखाउँदछ कि प्रतिस्पर्धी कोठामा (र यो लगभग सबै व्यावसायिक परियोजनाहरू हो), शीर्ष स्थानहरूमा देखा पर्ने साइटहरू ती हुन् जसले आधिकारिक स्रोतहरूबाट कडा ब्याकलिks्क प्राप्त गरेका छन्।
के ब्याकलिंक्स राम्रो मानिन्छ
साइट रैंकिंगमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने उच्च-गुणवत्ता ब्याकलिks्कसँग निम्न विशेषताहरू छन्:
थिमेटिक सम्बन्धित साइटहरूमा राखिएको।
उच्च रेटिंगको साथ आधिकारिक स्रोतहरूमा राखिएको।
उच्च-स्तरीय वेबसाइटहरूमा राखिएको।
कुनै नोफोलो विशेषता छैन।
एक विषयगत एch्कर (एक शब्द वा वाक्यांश, क्लिक गरेर तपाईं साइटमा जानुहोस्)।
विषय पाठमा अवस्थित जुन लक्षित पृष्ठसँग मेल खान्छ जुन लि leads्क नेतृत्व गर्दछ।
के ब्याकलिंक्सलाई घटिया मानिन्छ:
कम गुणवत्ताका साइटहरूबाट लि Links्कहरू।
न्यूनतम विश्वास भएका साइटहरूबाट लि Links्कहरू।
शंकास्पद शीर्षकहरूको साइटहरूको लिंकहरू।
साइटबाट अद्वितीय सामग्री बिनाको लिंक।
यस तथ्यको बावजुद, सामान्यतया, कम गुणस्तरको लिंकहरू प्राय: (वा अधिक प्राय:) केवल खोजी इन्जिनहरूले बेवास्ता गर्दछन्, तर यस्ता प्रकारका लिंकहरूको दुरुपयोग गर्दा दण्ड दण्ड हुन सक्छ। तदनुसार, खतरनाक लिंकहरू खारेज गरिनु पर्छ।
लिंक कहाँबाट आउँछ?
नि: शुल्क लि getting्कहरू प्राप्त गर्नका लागि यहाँ केही विकल्पहरू छन्:
एक गुणवत्ता लेख लेख्दै, इन्फोग्राफिक्स वा अन्य उपयोगी सामग्री सिर्जना गर्नुहोस्, र त्यसपछि यो साईट लिंकको जवाफमा साइट मालिकहरूलाई प्रस्ताव गर्दै।
विभिन्न रेटि Creatहरू सिर्जना गर्दै, तपाइँलाई रूचि भएको साइटलाई उल्लेख गर्दै र लि get्क प्राप्त गर्न अगाडि साइट मालिकलाई सम्पर्क गर्दै।
बिभिन्न समाचार क्षेत्रहरू सिर्जना गर्ने, रिपोर्टरको आमन्त्रित र तपाईंको साइटमा प्रकाशित लेखमा लिंक राख्नको लागि अनुरोध।
यी केवल केहि तरिकाहरू हुन् जुन तपाईं निःशुल्क लि get्कहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ, र फेरि, रचनात्मकता कुञ्जी हो!
नि: शुल्क लि of्कहरूको विपक्ष:
लि condition्कहरू सर्तका रूपमा स्वतन्त्र छन्, किनकि अनौंठो सामग्रीको निर्माणको लागि अझै पैसा र समय खर्च हुन्छ।
मुश्किलले पूर्वानुमान गर्न सकिने नतिजा, किनभने सबै काम साइट मालिकहरूसँग सञ्चारमा आधारित छ, र वास्तवमा, तपाईं उनीहरूलाई लिंक गर्न राजी गर्नुभयो।
सबै प्राप्त लिंकहरू १००% प्रयोगकर्ताहरूका लागि उपयोगी छन् र १००% सान्दर्भिक, अन्यथा साइट मालिकले तपाईंलाई लिंक गर्दैन।
एक धेरै उच्च विश्वास र प्राधिकरणको साथ साइटहरूबाट अद्वितीय लिंकहरू प्राप्त गर्ने क्षमता, उदाहरणको लागि, एक विश्वविद्यालयको आधिकारिक वेबसाइटबाट लिंक।
त्यहाँ एक यस्तो संभावना छ कि तपाईं एक धेरै गम्भीर प्रतिक्रियाको साथ लिंक प्राप्त गर्नुहुनेछ, जसले गम्भीर प्रयोगकर्ता ट्राफिक उत्पन्न गर्न सक्छ। खोज ईन्जिनहरूका लागि यसले तपाईंको महत्त्व बढाउनेछ।
केवल दुई विकल्पहरू छन्: लि links्कहरू किन्नुहोस् वा लि buy्कहरू खरीद नगर्नुहोस्। र यदि तपाईंले पछिल्लो विकल्प छनौट गर्नुभयो भने, त्यस्तै परिस्थितिमा जहाँ तपाईंलाई पैसा बचत गर्नु आवश्यक पर्दछ, मुख्य कुरा रचनात्मक हुनुपर्दछ! यस अवस्थामा औंलाको आधारभूत नियमः तपाईलाई सहयोगी हुनुपर्दछ।
लि buying्कहरू खरीद गर्ने धारणा:
साइटहरूको पूर्ण विश्लेषणका लागि धेरै उपकरणहरू आवश्यक छन् जुनबाट लि bought्कहरू खरीद गरिएका छन्, किनकि साइटहरू प्राय जसो प्रयोग गरिन्छ जसको गुणवत्ता स्पष्ट हुँदैन।
प्रतिस्पर्धीहरूको पूर्ण विश्लेषण गर्नको लागि धेरै उपकरणहरू आवश्यक छन्, किनकि खरीद प्रक्रियामा अत्यधिक ईर्ष्याको जोखिम छ।
निश्चित संख्या र लंगर र लिंकहरूको गुणस्तरको पालना गर्न आवश्यक छ, प्रतिस्पर्धीहरूबाट बाहिर नबनाई, अन्यथा तपाईं खोजी ईन्जिनहरूबाट प्रतिबन्ध लिन सक्नुहुन्छ।
दाता साइटहरू पत्ता लगाउन र स्क्रीनिंगको जटिल प्रक्रिया। कम लि cost्क लागतको साथ प्रायः साइटहरू "स्प्याम्ड" हुन्, र गुणस्तर समाचार स्रोतहरू एकल लिंकको लागि धेरै महँगो हुन सक्छ।
मुख्य फाइदा: सही कामको साथ, तपाईं अनुमानित परिणामहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ।
लि links्कहरू लिन यसले कम समय लिन्छ, किनकि तपाईंलाई कसैसँग कुराकानी गर्न आवश्यक पर्दैन र तपाईंले केहि पनि सिर्जना गर्नुपर्दैन। भुक्तान गरिएको पैसा=लगभग तुरुन्त परिणाम प्राप्त भयो।
संख्या र तपाइँको प्रतिस्पर्धी को लिंक को गुणवत्ता समायोजित गर्न क्षमता।
तर अन्य विकल्पको बारेमा के हुन्छ? लि getting्कहरू प्राप्त गर्नका लागि भुक्तान गरिएको विकल्प मूलत: लि links्कहरू र लेखहरू खरीद गर्नु हो।
वास्तविक कारण किन तपाईंको ब्याकलिks्कहरू काम गर्दैनन्
यदि साइट एक कार हो भने, त्यसपछि ब्याकलिks्कहरू यसको ईन्धन हो।
तर, सबै जस्तो लाग्छ त्यति सजिलो छैन। ब्याकलिks्कहरू निर्माण गर्न त्यहाँ थुप्रै बारन्सीहरू छन् जुन सीधै प्रोजेक्टको बृद्धि वा पतनलाई असर गर्दछ।
१. आन्तरिक वेबसाइट अनुकूलन
आन्तरिक वेबसाइट अप्टिमाइजेसनको साथ, सबै कुरा सरल छ। तपाईंले बुझ्नु आवश्यक छ कि राम्रो तपाईंको वेबसाइट आन्तरिक अनुकूलित छ, कम ब्याकलिlin्कको लागत हुनेछ।
यो केवल एक तथ्य हो। तसर्थ, अनुकूलन को लागी न्यूनतम चेकलिस्ट:
पाठको पहिलो २०० शब्दहरू
बोल्डमा सब भन्दा महत्त्वपूर्ण कुञ्जी हाइलाइट गर्नुहोस्
कुञ्जीहरूसँग स्प्याम नगर्नुहोस्, उत्तम १-%% अप्टिमाइजेशन
रोटी crumbs उपस्थिति + सही कुञ्जीपाटी भित्र
यो सब भन्दा आधारभूत हो। तर, केहि कारणका लागि, धेरै SEO हरू साइटमा सबै कार्यान्वयन गर्दैन।
यदि साइट सामान्य रूपमा अनुकूलित छैन भने, तब:
ब्याकलिks्कमा धेरै अधिक खर्च गर्नुहोस्
जुन प्राय कम लागतमा प्रभावकारी हुँदैन
त्यसकारण, ब्याकलिks्कहरू राख्नु अघि, हामीले पहिले क्रमबद्ध साइट राख्यौं।
मुख्य कुरा: राम्रो आन्तरिक अप्टिमाइजेसनले अक्सर नयाँ साइटलाई छिटो बढावा दिन्छ र जहिले पनि ब्याकलिंक्स लागतहरूमा बचत गर्दछ। उत्तम आन्तरिक अनुकूलन हो र ब्याकलिंक्सको बजेट कम हो।
२. एch्कर पाना
यो ब्लगमा पहिले नै एक पटक एन्कर सूचीको बारेमा, यसको डिजाइनको बारे र एक अनअन्क्ड लिंकको प्रोफाइल कस्तो देखिन्छ भन्ने बारे उल्लेख गरिएको छ।
यी सबैका लागि के हो?
सबै कुरा धेरै सजिलो छ। गुगलको लागि, एch्कर पाठ फिल्टरिंगका लागि साइट सबमिट गर्नका लागि एक मजबूत संकेत हो। यदि त्यहाँ दोहोर्याउने एch्कर पाठ हो, वा समग्र लि's्कको प्रोफाइल प्राकृतिक देखिदैन, भने यो ट्राफिक गुमाउने वा यसलाई बिल्कुल प्राप्त नगर्ने एक सीधा तरीका हो।
गुगल स्वाभाविकता मन पर्छ। यो केवल एक तथ्य हो!
सानो चेक सूची:
लिinking्क गर्नु अघि जहिले पनि ए an्गर पाना डिजाइन गर्नुहोस्;
जहिले पनि गतिशीलता अनुमान गर्नुहोस् - कहिले र कुन लिंक (कुन ए an्करसँग) राखिन्छ;
यस्तो TK लि build्क बिल्डर वा ठेकेदारमा राख्न।
यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। र त्यस्ता चीजहरू ह्यान्डल गर्न आवश्यक छ एसईओ विशेषज्ञहरु, अपेक्षित परिणाम ग्यारेन्टी गर्न।
वा साइटले ब्याकलिks्कहरूको लागि म्यानुअल दण्डहरू दिन्छ;
वा यो बढ्दैन।
त्यसकारण, लिंकहरू थप्नु अघि:
पहिले हामी आला द्वारा विस्तृत विश्लेषण गर्छौं;
डाटा स collecting्कलन;
हामी इच्छित कार्यको लागि लंगर पाना बनाउँछौं।
मुख्य कुरा: सुरुमा TOP मा विस्तृत विश्लेषण गर्नु आवश्यक छ। एch्कर पाना डिजाइन गर्नुहोस्। समय पोष्ट गरेर वितरण गर्नुहोस्। र मात्र त्यसपछि ब्याकलिks्कहरू थप्नुहोस्।
धेरै व्यक्ति लि l्क गर्ने/लि getting्क गर्ने गतिशीलतामा ध्यान दिदैनन्। तर व्यर्थमा!
अक्सर गतिशीलता एक ठूलो निर्णय हो र शीर्ष प्राप्त गर्नमा एक प्रमुख कारक हो।
प्रतिस्पर्धी को आला मा केहि backlinks छ;
यदि तपाईं यसलाई सामान्य रूपमा राख्नुहुन्छ भने, उदाहरणका लागि, प्रति महिना -1०-१००;
त्यसो भए यो गुगललाई शicious्कास्पद लाग्नेछ, र साइट छिटो माथि जान सक्दैन।
साथै, डाईनेमिक्स ब्याकलि back्कको प्रकारमा निर्भर गर्दछ।
मुख्य पृष्ठहरूका लिंकहरूको गतिशीलता प्राय: धेरै सुस्त हुन्छ;
टिप्पणीहरू धेरै बढी छन्;
मुख्य पोष्टहरू र टिप्पणीहरूको बीच बीच बीचमा कतै अतिथि पोष्टहरू द्वारा;
गृह पृष्ठहरूबाट लिंक गर्दै।
हामी हाल एक दर्जन परियोजनाहरु मा धेरै को लागी संख्या को लागी धीमा गतिशीलता परीक्षण गर्दैछौं, र परिणाम सामान्य मा गतिशीलता मा दृश्य परिवर्तन गर्दछ।
मुख्य कुरा: बढ्न नसकेका साइटहरूको लागि सामान्य कारण एकदम चाँडो गतिशीलता हुन सक्छ, जुन गुगलले याद गर्छ र अप्राकृतिक ठान्छ।
The. Google द्वारा यादृच्छिक कागजात एल्गोरिथ्म
यो गतिशीलतामा पनि लागू हुन्छ।
संक्षिप्त रूपमा एल्गोरिथ्मको बारेमा:
यदि तपाइँले साइटमा केहि लिंकहरू राख्नु भएको छ भने;
र यो sagged;
त्यसो भए तपाईले धेरै राख्नु भयो भने;
यो एकदम बिस्तारै बढ्न जारी राख्न सक्छ।
यस प्याटेन्टका अनुसार, त्यस्तो ह्रास पछि, अर्को २० दिन केही नगर्नु राम्रो हुन्छ। तपाईंको साइट गुगल को बन्दूक मुनि छ।
धेरैलाई यो एल्गोरिथ्मको बारेमा थाहा छ, र त्यस्ता अवस्थाहरूमा उनीहरूले सामान्यतया ब्याकलि back्कहरू निर्माण गर्न जारी राख्छन्। नतिजाको रूपमा, साइट बढ्दैन वा यसको वृद्धि लगभग अभेद्य छ।
यो विशेष गरी ताजा साइटहरूमा देखा पर्दछ, जुन, पुनर्स्थापना र अनुक्रमणिका पछि, तुरून्त पम्प सुरु हुन्छ।
Links. लिंकहरूको प्रकार र तिनीहरूको गुणस्तर
वास्तविक जोखिम केवल १ प्रकारको ब्याकलिंक प्रयोग गर्नु हो। त्यसकारण यो बुझ्नु महत्त्वपूर्ण छ:
कि ब्याकलिंक्स को विभिन्न स्रोतहरु आवश्यक छ;
केहि प्रकारका लिंकहरू केवल पातलो हुनेछन्;
केवल मेगा उच्च-गुणवत्ता लि links्कहरू उपस्थित हुन सक्दैन - यो अप्राकृतिक देखिन्छ;
मुख्य प्रकारका लिंकहरू जुन अधिक प्रयोग गर्दछ:
लेखहरूमा लिंक (अतिथि पोष्टिंग, आउटरीच)
उद्धरण (स्थानीय एसईओ को लागी, तर मात्र होइन)=निर्देशिकाहरू
सामाजिक लिंक (रेडडिट, फेसबुक, गुगल +, ट्विटर)
साइटमा लिंक द्रव्यमान निर्माण गर्दा, लिंकहरूको प्रकारहरू सन्तुलन गर्नु महत्त्वपूर्ण छ। तपाईंको लिंकको प्रोफाइल प्राकृतिक देखिनको लागि।
मुख्य कुरा: लिंक द्रव्यमान निर्माण गर्न केवल १ लिंक प्रकार प्रयोग नगर्नुहोस्। जब तपाईं माथि पुग्नुहुन्छ, तपाईं एक निर्धारणकर्ता चेक प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ र ट्राफिक गुमाउन सक्नुहुनेछ।
साइटले माथि छोड्दा यसलाई छोडियो। कारण केवल सीधा एch्कर हो, PBN बाट मात्र लिंकहरू, धेरै सामान्य गतिशीलता। तुरुन्तै शीर्षमा गए3आरएफ अनुरोध द्वारा देश मा।
यस अवस्थामा यो केवल एक परीक्षण प्रयोग थियो। तर, यदि तपाइँ यस तरीकाले सेतो फ्लफि साइटलाई प्रमोट गर्नुहुन्छ, तपाइँले बुझ्नु आवश्यक छ कि कत्ति ठूलो जोखिम छ र यसको लागि तयार रहनुहोस्।
यी सबै कारणहरू छैनन्। तर हाम्रो अनुभव मा, यी सबैभन्दा आधारभूत हो। तसर्थ, तपाईंले ध्यान दिन आवश्यक छ:
राम्रो आन्तरिक अनुकूलन;
सामान्य लंगर सूची र लि advance्क पोष्ट गर्नु अघि, यो योजना बनाउनुहोस्;
गतिशीलता र पहिलो विश्लेषण;
यस्तो अनियमित एल्गोरिथ्मको बारेमा जान्नुहोस्, जसले साइटको बृद्धिलाई असर गर्न सक्छ;
लि's्कको प्रोफाइललाई सामान्य रूपमा पातलो पार्दै र यसलाई प्राकृतिक बनाउँदछ।
यस अवस्थामा, प्रति स्ट्रान्डको परिणामको सम्भावना बढ्छ।
ब्याकलिks्क अझै पनी महत्वपूर्ण छ SEO अनुकूलन र पदोन्नति। तर यो याद राख्नु महत्वपूर्ण छ कि लिंकहरू राम्रो गुणको हुनुपर्दछ र सम्बन्धित साइटहरूबाट। यसैले, खोजी ईन्जिनको शीर्षमा सफलतापूर्वक प्रवेश गर्ने मुख्य गोप्यता मुख्यतया दुई बुँदाहरूमा आउँछ: राम्रो गुणस्तरको सान्दर्भिक सामग्री सिर्जना गरेर ब्याकलिंक्सहरू। जब यी दुई सर्तहरू पूरा हुन्छन्, तपाईंको साइटले शीर्षमा पुग्नको लागि आवश्यक बढावा प्राप्त गर्दछ।